Apple Park, Isidlo sasemini kunye noTim Cook, iMacOS Beta 5, kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Apple Park, Isidlo sasemini kunye noTim Cook, iMacOS Beta 5, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UPedro Rodas | | iapile, Mac Sierra, Izaziso
Ngenye iCawe siseSoy de Mac ukukukhumbuza ngeendaba zebhlog ezijongwe kakhulu ngabalandeli bethu. Njengazo zonke iiveki okwethutyana sinee-betas ezintsha zento abaya kuba yiyo ezi nkqubo zilandelayo zeemveliso zeapile yokulunywa kodwa sizokukhumbuza ngezinye iindaba ezininzi ezivakaliswe emnatheni kule veki.
Sele singoMeyi kwaye iWWDC 2017 ikufutshane nekona kwaye kunye namahemuhemu aqinisekisa ukuba sinokubona entsha Isikhumbuzo se-XNUMXth kwi-iPhone ngoJuni hayi ngoSeptemba.
Masiqale ukudityaniswa kwanamhlanje ngeendaba awasifundisa zonaokanye iyintoni ividiyo yokugqibela iyakuba yintoni iApple Campus 2 entsha, ipaki yeapile. Isakhiwo esitsha esakhiwe nguApple ukuze amawaka kunye namawaka abasebenzi abavela kulo lonke elaseMelika agxile kule ndawo.
Nangona olu suku yayilusuku lomsebenzi, kubonakala ngathi amakhwenkwe aseCupertino awafuni kuchitha ixesha kwaye asebenzise olo suku ukumilisela I-beta entsha ye-macOS 10.12.5, kanye beta yesihlanu. Njengakwiinguqulelo zangaphambili, le beta intsha igxile ekuphuculeni kokubini ekusebenzeni nakukhuseleko ngokubanzi lwe-macOS.
I-Apple AirPods sele imveliso "ethandwa kakhulu" Zingaphi iinkampani eziqalise kule minyaka idlulileyo, okanye ubuncinci yile nto ivele kuphononongo lwamva nje oluveza amanqanaba aphezulu olwaneliseko phakathi kwabasebenzisi.
Ngokwophando lwamva nje olwenziwe ziiQhinga lokuYila kunye namaFemu amava, Iipesenti ezingama-98 zabanini zabanye AirPods amabango "aneliseke kakhulu" okanye "anelisekile" ngee-headphone ezintsha ezingenazingcingo ze-apile yokuluma, ekufuneka sidibanise kuyo iipesenti ezingama-80 zabathengi abathi "banelisekile."
Abo bakwaRedmond bangenise kule veki iLaptop eNtsha yeMicrosoft, ikhompyuter encinci kwaye engasindi ejolise ekumeleni kwi these lighter evela kwiApple, kodwa ubukhulu becala siyifumana iyimbangi enzima kwiiChannelbook. Ngale ndlela, kufuneka ujonge ngaphaya kwamanani kwaye, njengoko sihlala sisitsho, amava omsebenzisi yeyona nto yenza umahluko phakathi kwenye nenye, ukongeza kwindalo apho umsebenzisi ahamba khona, kuba ukuba bane-iPhone kunye i-iPad, kuyinto eqhelekileyo ukutsala iimveliso ze-Apple.
Eli ayiloxesha lokuqala lokuba nesiphakamiso etafileni isidlo sasemini kunye ne-CEO Enye yezona nkampani zibalulekileyo emhlabeni kwicandelo lobuchwepheshe, kwaye kukuba uTim Cook sele eyenzile le ntlobo yeefandesi ngeenjongo zesisa ngaphambili ukusukela ngo-2013. Njengokuba sinomdla wokwazi singatsho ukuba unyaka wokuqala kule Cook uzibolekise ukuba enze le fandesi kunye noCharitybuzz, elona nani liphezulu lafunyanwa, i-610.000, XNUMX yeedola kwaye eli nani lahlukile kule minyaka idlulileyo, ngeli xesha ukongeza kwisidlo sasemini, umntu ophumelele ifandesi Uya kufumana ukhenketho olukhokelwayo kwiApple Park entsha njengoko ukutya kuza kubanjelwa e-Apple HQ.
Iziphumo zezezimali zika-Apple kwi kwikota yesibini ka-2017 banezinto ezintle abanazo. Ukuqala ngokukhutshwa kwamanani kunye nokushiya ecaleni intelekelelo kunye nedatha enokwenzeka, inkampani yaseCupertino iphela kule kota yesibini $ 52.900 yezigidi kwingeniso. Eli nani lizisa ingeniso yekota kwi-2,10 yesabelo ngasinye Ezi ziphumo zithelekiswa nokuthengisa kwe- $ 50.600 yezigidigidi kunye nenzuzo eyi-1,90 yesabelo ngasinye, efunyenwe yinkampani kwikota enye yonyaka ophelileyo. Kule kota, iipesenti ezingama-65 zentengiso zenziwe yiApple ngaphandle kwaseMelika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Apple Park, Isidlo sasemini kunye noTim Cook, iMacOS Beta 5, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-Amazon Prime Video inokubetha i-Apple TV ehlotyeni